Debian 11 Bullseye: Debian အသစ်၏တပ်ဆင်မှုကိုအနည်းငယ်ကြည့်ပါ Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | ဖြန့်ဝေ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
တရားဝင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အချိန်ဇယားများနှင့်အညီချဉ်းကပ်လျက်ရှိသည် Debian အဖွဲ့အစည်း၏လွတ်မြောက်မှု အသစ်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း de Debian GNU / Linux ခေါ်ဆိုခ "Debian 11 Bullseye"ဒီကိစ္စကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးစတင်ပြီး၎င်းကိုစတင်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါမည်။
ဒါကိုသတိရကြပါစို့။ "Debian 11 Bullseye" ဒါကြောင့်ဒီနှစ်သို့မဟုတ်လာမည့်အဘို့အရရှိနိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ အားလုံးအထက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "Debian 10 Buster" ဒီလ Julio 2021သူလွတ်လာကတည်းက2နှစ်ရှိပြီ ထိုကာလသည်၎င်း၏အသုံး ၀ င်သောသက်တမ်းအတွက်တည်ငြိမ်သကဲ့သို့အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ဖြစ်သည်23 နှစ်နှင့် အသစ်တစ်ခုကိုတည်ငြိမ်ဗားရှင်း Debian GNU / Linux.
နှင့်ပုံမှန်အတိုင်း, ဒီပစ္စုပ္ပန်ထုတ်ဝေ၏ဘာသာရပ်သို့အပြည့်အဝမဝင်ခင်, ငါတို့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့2၏ link ကိုအောက်တွင်ချန်ထားမည် သက်ဆိုင်သောယခင်ပို့စ်များ သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ တပ်ဆင်ပြီးနောက် de "Debian 10 Buster".
သင်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အခြားစာပေများနှင့်ဆက်နွယ်သောအခြားအချက်အလက်များကိုသင်ရှာမည့်နေရာများ မွမ်းမံပြင်ဆင်ထားသော၊ ၎င်းကိုအခြေခံပြီး၎င်း၏ လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသော Operating Systems ကိုတည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်သည်။
"ဒီ post မှာတော့ install လုပ်ပြီးတာနဲ့ MX-Linux 19.0 နဲ့ DEBIAN 10.2 နှစ်ခုလုံးကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဘုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ ဤသင်ခန်းစာကိုရယူရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် MX-64_December_x2019.iso ဟုခေါ်သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ ရက်စွဲပါ 19-bit, MX-Linux Snapshot ၏ ISO file နှင့် DEBIAN ၏နောက်ဆုံးတည်ငြိမ်သော 64-bit, 64-bit, 2019 ရက်စွဲပါ DVD အတွက် debian-10.2.0-amd64-DVD-1.iso အမည်ရှိ။" ထည့်သွင်းပြီးနောက် MX-Linux 19.0 နှင့် DEBIAN 10.2 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ
1 Debian 11 Bullseye: ချဉ်းကပ်မှုဖြန့်ချိခြင်း
1.1 Debian 11 Bullseye အကြောင်း
Debian 11 Bullseye: ချဉ်းကပ်မှုဖြန့်ချိခြင်း
အတိုင်း ဝီကီအပေါ်တရားဝင်သတင်းအချက်အလက် de la Debian အဖွဲ့အစည်းဤနှစ်သည်နှစ်ဖြစ်သည် "Debian 11 Bullseye"ဤအရာသည်ဤဗားရှင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုအတွက်အဓိကမှတ်တိုင်များဖြစ်သည်။
"Debian သည်၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုအသစ်ကိုပုံမှန်ကြေငြာခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများသည်မူကွဲတစ်ခုစီအတွက် ၃ နှစ်ခန့်အထောက်အပံ့နှင့် ၂ နှစ်အပို "LTS" အထောက်အပံ့ကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။". Debian မူကွဲ
ထိုအများစွာသောအကြား သတင်းနှင့်အင်္ဂါရပ်များ, "Debian 11 Bullseye" အောက်ပါတို့နှင့်အတူလာလိမ့်မည်
အောက်ပါဟာ့ဒ်ဝဲဗိသုကာများအတွက်တရားဝင်ထောက်ခံမှု: 32-bit PC (i386) နှင့် 64-bit PC (amd64), ARM 64-bit (arm64), ARM EABI (armel), ARMv7 (EABI hard-float ABI, armhf), end-endian MIPS (mipsel)၊ 64-bit "little-endian" MIPS (mips64el), PowerPC, 64-bit "little-endian" (ppc64el) နှင့် IBM System z (s390x) ။
အဆိုပါကှကျ၏ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းစုစုပေါင်း ၅၇,၇၀၃ ခုထက်ပိုသော Package အသစ် ၁၃,၃၇၀ ကျော်။ ဖြန့်ဝေထားသောပရိုဂရမ်အများစုကို - ၃၅၅၃၂ ခုထက်ပိုသောပရိုဂရမ်များ (Buster ရှိစုစုပေါင်း၏ ၆၂% နှင့်ကိုက်ညီသည်) ကိုမွမ်းမံခဲ့သည်။ အထုပ်အပိုးအများအပြား (၇၂၇၈ ထက်ပိုသော၊ Buster ရှိ ၁၃% သော) အရာများကိုလည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖယ်ရှားပစ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည့် Desktop ကိုပတ်ဝန်းကျင်: GNOME 3.38, KDE Plasma 5.20, LXDE 11, LXQt 0.16, MATE 1.24 နှင့် XFCE 4.16 ။
မရှိမဖြစ်ကှကျဖြေ - ၅.၁၀ စီးရီးနဲ့ ၇.၀ စီးရီးကနေ LibreOffice ဗားရှင်းတခုရလာလိမ့်မယ်။
exFAT ဖိုင်စနစ်များအတွက် Kernel ပါဝင်သည့်အထောက်အပံ့: Debian 11 Bullseye သည် exFAT ဖိုင်စနစ်ကိုထောက်ပံ့သော Linux kernel ကိုထောက်ပံ့ပေးသောပထမဆုံး version ဖြစ်ပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည် exFAT filesystems ကို mount ရန်အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့် exfat-fuse package မှတစ်ဆင့်ပေးသော user-space file system implementation ကိုမလိုအပ်တော့ပါ။
နောက်တစ်ခုကသင်ခန်းစာပုံစံ၊ မျက်နှာပြင်တစ်ခုချင်းစီကိုအရာပေါ်တွင်လမ်းညွှန်ပေးမည့် screenshots များဆက်တိုက်ပြသပါလိမ့်မည် တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ် ဒီအနာဂတ်နှင့်အသစ်တည်ငြိမ်ဗားရှင်း၏ "Debian 11 Bullseye", Que အလွန်မကြာမီအဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်.
ဒီအတွက်ငါတို့ကသုံးလိမ့်မယ် VirtualBox နှင့်အတူ Virtual စက် (VM) နှင့် Debian Testing Weekly ISO:
ပိုမိုသိရှိရန် တရားဝင်သတင်းအချက်အလက် အပေါ် "Debian 11 Bullseye" အောက်ပါလင့်ခ်များကိုလေ့လာနိုင်ပါသည် -
Debian 11 ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များ (bullseye), 64-bit PC
amd11 ဗိသုကာများအတွက် Debian GNU / Linux 64 ထည့်သွင်းမှုလမ်းညွှန်
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Debian 11 Bullseye»၏အနာဂတ်တည်ငြိမ်ဗားရှင်းဖြစ်သော Debian GNU / Linux၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်မကြာမီထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Debian 11 Bullseye - Debian အသစ်ထည့်သွင်းခြင်းကိုကြည့်ခြင်း
Debian ဆိုတာဘာမှန်းမသိဘူး။ xfce 4.16 ရှိတယ်ဆိုတာသံသယဝင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက debian တည်ငြိမ်မှုရဲ့ဒphilosophနမဟုတ်ဘူး။ ဒါကစမ်းသပ်ခြင်းလိုပဲ Desktop version ပဲ။ ဘဝမှာ debian တည်ငြိမ်ပြီး debian ကိုတွေ့ရပြီ။ စမ်းသပ်ခြင်းအတူတူ desktop ကိုဗားရှင်းကိုအသုံးပြုပါ။
Debian stabil သည် xfce 4.14 ကိုသယ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။ သင်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြောခဲ့သကဲ့သို့ kernel 5.10 ကိုသယ်ဆောင်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ၅.၄ ကိုသယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်ပြီးစမ်းသပ်ပြီးသော kernel ဖြစ်သည်။ ၅.၁၀ သည် ၄ ​​ရက်ကြာနေပြီဖြစ်သည်။ xfce 5.4 အရ၎င်းသည် debian မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်မဟုတ်၊ ၎င်းသည်စမ်းသပ်ပြီး၊ ရှုံးနိမ့်သောအရာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ xfce 5.10 ကဲ့သို့ပင်။
Debian ၏ထုတ်လုပ်မှုသံသရာသည်ဤအစီအစဉ်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုနည်းသော်လည်းလျော့နည်းသွားနိုင်သော်လည်း၊ debian ၏အတွေးအခေါ်သည်၎င်းသည်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည် ၂ နှစ်၊ ၂ နှစ်နှင့်သုံးနှစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ လ, etc
မင်္ဂလာပါ။ သင်၏မှတ်ချက်နှင့်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပေးအပ်ထားသည့်အချက်အလက်အားလုံးသည်၎င်းတို့ရရှိသော Debian အဖွဲ့အစည်း၏တရားဝင်ရင်းမြစ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်၊ သင်၏စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမှတစ်ဆင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်ထုတ်လွှတ်မည့်နေ့နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုတိကျသည်။ Packern version တွေဖြစ်တဲ့ Kernel နဲ့ XFCE တို့ဟာဆောင်းပါးပါတရားဝင် link မှာဖော်ပြထားတဲ့ version တွေဖြစ်ပါတယ်။
SISISI, Debian 11 သည် XFCE 4.16 ကိုသယ်ဆောင်သည် -
မင်္ဂလာပါ Arangoti ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သေချာသည်မှာ၎င်း၏တရားဝင်ရင်းမြစ်အရ XFCE မူကွဲဖြစ်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတည်ငြိမ်သော ISO ISO ထွက်ပေါ်လာသည့်အခါလအနည်းငယ်သို့မဟုတ်အများဆုံး ၁ နှစ်အတွင်း၌၎င်းဗားရှင်းသည် Debian 1 Bullseye အတွက်အလွန်ကောင်းပြီးရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အထက်တွင်သူသည် knowing မသိဘဲအတည်ပြုသည်
ဦး နှောက် ဟုသူကပြောသည်
standard system utilities နှင့် xfce ကိုသင် install လုပ်ပြီးပါက debian desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
မင်္ဂလာပါ, Brainlet ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် DVD ISO ကိုသုံးသောအခါ၎င်း option ကိုမူလအတိုင်းစစ်ဆေးပြီး GNOME option ၏ဘေးတွင်ရှိသည်။ တစ်နည်းပြောရရင် Desktop Environment ကို install လုပ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆထားတာကြောင့် activate လုပ်တဲ့ "Root Category" လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဒါကြောင့် GNOME နဲ့ပုံမှန်အားဖြင့် check လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာတော့ GNOME ကိုမဖြုတ်ဘဲ XFCE ကိုထည့်လိုက်သည်။ ဒါကငါဖန်သားပြင်ပေါ်မှာငါသာပြောင်းလဲမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည်“ Debian အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏လက်စွဲစာအုပ်” ကိုကြည့်လျှင် (Debian Handbook - https://debian-handbook.info/browse/es-ES/stable/ ) အခန်းကြီး "4.2.17 ၌တည်၏။ ထည့်သွင်းမှုအတွက် package များရွေးချယ်ခြင်း»ယခင်ကပုံမှန်အားဖြင့်စစ်ဆေးခဲ့သောဤရွေးစရာကိုပြသည်။ Desktop Environment တွင်ဖော်ပြမထားပါက Debian 10 အတွက် default DE ဟုယူဆရသော XFCE ကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအတူတကွအမှတ်အသားပြုလျှင်၎င်းသည်ထည့်သွင်းရန်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုသာဖြစ်လိမ့်မည်။
MongoDB 5.0 သည်ဒေတာများကိုအချိန်စီးရီးပုံစံများ၊ နံပါတ်ပြောင်းခြင်းနှင့်အခြားအရာများဖြင့်ပါရှိသည်
OpenSearch 1.0 တွင် ARM64 အတွက်အထောက်အပံ့၊ web interface တိုးတက်မှုနှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်